Dawladda Kenya oo ka hadashay Booqashadii Madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Dhoobley | SAHAN ONLINE
Dawladda Kenya oo ka hadashay Booqashadii Madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Dhoobley
NAIROBI – Dawladda Kenya ayaa ka hadashay booqashadii Madaxweye Uhuru Kenyatta uu ku tagay saldhigyo ay ciidamada Kenya ku leeyihiin dalka Soomaaliya taasoo ay ku sheegeen mid caadi ah.
Afhayeenka dawladda Kenya Monoah Esipisu oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa beeniyey in khilaaf dhinaca diblumaasiyada ah uu ka dhex abuurmay dawladaha Kenya iyo Soomaaliya kadib booqashadii Kenyatta ee Dhoobley.
Booqashada ciidamada uu ku tegey Madaxweynahooda waa mid caadi ah,waana mid muhiim ah in Madaxweynaha uu u muujiyo taageero ciidamada”ayuu yiri
Monoah Esiposu oo ka hadlayey in khilaaf diblumaasiyadeed ka dhashay booqashadan ayaa sheegay in uu hubo in uu jiro khilaaf balse lagu xalinayo dhinyada diblumaasiyada.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa booqasho aan la shaacin ku tagay degaanka Dhoobley ee ka tirsan Soomaaliya ,iyadoona maalinta khamiista ah lagu wado in Madaxweyne Farmaajo uu booqashadiisii ugu horeysay ku taco dalka Kenya tan iyo markii uu la wareegay xafiiska Villa Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa booqashadiisu qaadan doonta muddo saddex maalood ah ,wuxuuna halkaas uga qeybgeli doonaa shirweynaha Madaxda dowladaha ku mideysan urur goboleedkya IGAD oo ka dhici doona magaalada Nairobi ee dalkaas.